Ebe 5 kacha gaa ileta na Rwanda
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ebe 5 kacha gaa ileta na Rwanda
Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Rwanda nwere akụkọ ihe mere eme jọgburu onwe ya, n'ihi nke ahụ, ọ bụghị n'etiti ndị njem nleta kachasị elu n'Africa. Kaosinadị, mba Africa nwere ọganihu n'afọ ndị na-adịbeghị anya mgbe gọọmentị ya mere mgbanwe ole na ole, dị ka ịme ihe Akwụkwọ ikike Rwanda mfe inweta. Mba ahụ enwetawo ọnọdụ ya na ndepụta ahụ site na ịdọrọ ọtụtụ ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile gaa n'ọtụtụ anụ ọhịa ya na ala mara mma. Lee ntụpọ ise onye ọ bụla kwesịrị ịhụ na nleta ha ọzọ.
Ogige Ugwu Volcanoes na-enye ụfọdụ ọrụ kachasị mma na mba ahụ. Ndị ọbịa nwere ike ịga ugwu ugwu mara mma ma soro na mmemme a na-enye. Ndepụta ozodimgba, ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ, bụ ogige ntụrụndụ kachasị mma na ọ bụ otu n'ime ihe mere ndị mmadụ ji aga mba ahụ. Ogige ahụ na-enyekwa ohere ịchụso enwe ọla edo, nke dị ọnụ ala karịa. N'ịbụ ndị dị nso, ọmarịcha ụlọ oriri na ọ Volụ Fiveụ Five Volcanoes ahụ nabatara ọtụtụ ndị njem na-enyere ha aka inweta ikikere kwesịrị ekwesị iji hụ oke oke ọhịa na ebe obibi ha.
Memoriallọ Ncheta Mgbukpọ nke Kigali
Iji ghọta ndị bi na Rwanda, ndị njem kwesịrị ịmụ maka akụkọ ọjọọ ha. Iji mee nke ahụ, ndị njem nleta nwere ike ịga leta Memoriallọ Ncheta Mgbukpọ nke dị n'isi obodo ahụ. Ntuziaka a na-ege ntị site na njegharị ahụ na-enye nkọwa nke ngosipụta ahụ, ọ na-anwa ịkọwa ihe omume nke ụbọchị ahụ na otu ụwa siri kwụrụ dịka e gburu ihe ruru otu nde ndị Rwandans. Ememe ncheta a bụkwa ebe a na-eli ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndụ ndị aka ha dị ọcha lara n'iyi na '94. Kemgbe mmalite ya na 1999, e jikọtara ya nke ọma ma gbaa ya gburugburu ubi ndị mara mma.
Otu n'ime ebe kachasị mma n'akụkụ ndịda nke mba ahụ, Nyungwe nwere ụfọdụ ụdị biodiva ndị kacha baa ọgaranya na Rwanda niile. Ahịhịa ndụ na-acha ahịhịa ndụ ahịhịa, nke na-enyere aka ịchekwa ụmụ anụmanụ n’ime oke oke ọhịa ahụ. Ndị ọbịa ahụ nwere ike soro chimpanzees na mpaghara ahụ. Ogige ahụ na-enyekwa ọtụtụ ụzọ ụkwụ n'okporo ụzọ, ebe ha nwere ike ịgba akaebe ọtụtụ ụdị anụ ọhịa mara mma na ebe mara mma. Iji nweta ahụmịhe nke Rwanda, ndị njem nwere ike ịnya ụgbọ ala gaa n'ogige ntụrụndụ mba a karịa ịnwe bọs na-eme njem.
Ọdọ mmiri Kivu
Ọdọ mmiri a mara mma dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mba ahụ ma nwee ike ịnweta ya n'obodo Gisenyi. Gisenyi anaghị ebi ebi, ọ bụ ya mere ndị ọbịa ebe ahụ ji nwee ọmarịcha echiche na ọnọdụ dị jụụ. Ọnọdụ okpomọkụ anaghị arị elu karịa 77 degrees Fahrenheit n'ihi na ọ dị n'elu elu, nke na-eme ka izu ike na igwu mmiri n'ụsọ osimiri na-atọ ụtọ karị. Ndị njem nleta na-enwekwa ịnya ụgbọ ala n'etiti obodo dị n'akụkụ ọdọ mmiri, ma ọ bụ n'etiti Nyungwe National Park na Volcanoes National Park, n'ihi na ụzọ dị nro na-aga n'etiti ugwu na ugwu na-enye echiche na-adọrọ adọrọ.
Ogige Ntụrụndụ Akagera
Akagera bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ mba kachasị elu na mba ahụ, naanị otu nke bụ paradaịs safari. A na-ahụta ya dị ka otu n'ime savannas kachasị mma na East Africa tupu mgbukpọ ahụ, nke bụ mgbe ọtụtụ anụmanụ gburu ma ọ bụ chụpụ ha gafere oke. Mgbe emeghachitere ụdị dị iche iche na iwu mkparịta ụka gọọmentị, Akagera bụzi nnukwu mmadụ ise na ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ mara mma dịka ịnyịnya ọhịa, impalas, giraffes, agụ iyi.